मैयादेवी कन्या कलेज नजिकै भेटिएको शवको अनुसन्धान प्रहरीले सक्यो, हत्याको आरोपमा चारजना पक्राउ, दुई जना फरार | PBM News.com
मैयादेवी कन्या कलेज नजिकै भेटिएको शवको अनुसन्धान प्रहरीले सक्यो, हत्याको आरोपमा चारजना पक्राउ, दुई जना फरार
चितवन १२ साउन । मैयादेवी कन्या कलेज नजिकैको झाडीमा बोरामा बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको शव हत्यागरेर फालिएको चितवन प्रहरीको अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ । असार २३ गते बोरोमा बाँधिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो । सडेगलेको अवस्थामा भेटिएको शवको सनाखत समेत भएको छ । प्रहरीका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १४ शिवनगर बस्ने वर्ष ४१ को राजकुमार गुरुङलाई श्रीमति सहित मिलेर हत्या गरेका थिए ।
हत्याको आरोपमा प्रहरीले चारजनालाई पक्राउ गरेको छ । अन्यदुईजना फरार छन् । पक्राउ पर्नेमा तनहुँ भानु नगरपालिका वडा नं. ४ साल विस्ने घर भइ हाल भरतपुर १० कवर्डहलमा बसोबास गर्दै आएका ३४ वर्षीय कमल गन्धर्व, रौतहट जिल्ला गजुरा नगरपालिका वडा नं. १ घरभई हाल भरतपुर १० कवर्डहलमा बसोबास गर्दै आएका ३० वर्षका अमृत भन्ने अम्मर वहादुर थिङ, दाङ जिल्ला घोराही उपमहानगरपालिका १० घर भई हाल सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएका २४ वर्षका सागर ओली र चितवन भरतपुर ८ गौरीगञ्ज बस्ने वर्ष ३१ का प्रकाश विक रहेका छन् । फरार हुनेमा कमल गन्धर्वका २८ वर्षकी श्रीमती लक्ष्मी मगर,तनहुँ भानु नगरपालिका वडा नं. ४ साल विस्नेघर भई हाल भरतपुर १० कवर्डहलमा बसोबास गर्दै आएका ४५ वर्षकी सिता गन्धर्व रहेकी छिन् ।
घटनाको विषयमा चारहप्ताभन्दाबढी समय लगाएर प्रहरीले अध्ययन गरेका थिए ।
घटना यसरी भएको थियो –
असार ६ गते भरतपुरको वडा नं. १० स्थ्ति गेष्टहाउस चौरको मन्चमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका तनहुँ भानु नगरपालिका ४ घरभएका कमल गन्धर्वले व्यवसाय प्रयोजनका लागि दैनिक १५ सय रुपैयाँ भाडा दिनेशर्तमा रिक्सा मृतक राजकुमार गुरुङले लिएर गए । रिक्सा लगेको दिनदेखि राजकुमार रिक्सावाला गन्धर्वको सम्पर्कमा गएनन । रिक्सा लिएर गएको मान्छे सम्पर्क विहिन भएपछि राजकुमारको खोजिगर्न थाले । असार १९ गते साँझ ६ बजे मालपोत चोकमा राजकुमारलाई फेला पारे । तर उनको साथमा रिक्सा थिएन ।
उनले राजकुमारलाई समातेर आफु बसेको ठाउँ गेष्टहाउस चौरमा लगे । त्यहाँ कमल गन्धर्व र उनको श्रीमती लक्ष्मी मगर समेत अमृत भन्ने अम्मर बहादुर थिङ, २४ वर्षका सागर ओली, ३१ वर्षका प्रकाश विक लगायतलाई बोलाएर रिक्सा लगेर हराएको विषयलाई लिएर कुटपिट गरे । कुटपिट गर्ने क्रममा राजकुमारले रिक्सा कालिका नगरपालिकाको पदमपुरमा लगेर विक्रीगरेको बताए । कुटपिट पश्चात उक्त दिन नै राती कमल गन्धर्वले अटो रिक्सा रिजर्भ गरी लक्ष्मी मगर, अम्मर वहादुर थिङ, सागरओली, प्रकाश विक समेतले मृतक राजकुमारलाई लिएर अटो रिक्सा लिन पदमपुर गए । उनले भनेको ठाउँमा अटो रिक्सा फेला परेन । राती ९ ÷१० बजेतिर पुनः गेष्टहाउस चौरमा फर्कीएन । कमल गन्धर्व र राजकुमार गुरुङ समेतका केहि मानिसहरु त्यहिँ बसे, अन्यकेहि आ–आफ्नो गन्तव्य तर्फ लागे ।
राती ११ बजे राजकुमार गुरुङको सोही गेष्टहाउस चौरको मन्चमा मृत्यूभयो । मृत्युपश्चात कमल गन्धर्वले सो विषयमा अन्य कुटपिटगर्ने व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क गरे । सबै कुराहरु बताए । घटना लुकाउन र अपराधबाट जोगिनका लागि राजकुमार गुरुङको शवलाई बोरामा बाँधेर एकान्त स्थानको छनौटगरी फाल्ने योजना बनाए । योजना अनुसार नै कमल गन्धर्व, अमृत भन्ने अम्मर बहादुर थिङ, सागर ओली समेतले रातको समयमा केन्द्रीय टिर्मिनल बसपार्कबाट ठेला रिक्सा घटना स्थल सम्म ल्याई राजकुमार गुरुङको शवलाई बोरामा बाँधेर कोही कसैले नदेख्ने गरी भित्री सडकको प्रयोग गरेर शव फेला परेको स्थानमा पु¥याइ फालेर उनीहरु फरार भए ।
घटनामा संलग्न भएकाहरुको शव फेला परेको दिन नै पहिचान भएको थियो । सोही अनुसार पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान कसुर अन्तर्गत मुद्धा दर्तागरी अनुसन्धान कार्य सकिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत सम्मानित जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सुर्य वहदाुर थापाले जानकारी दिए । प्रहरीले अभियुक्तहरु मध्ये एकजना बालक रहेकाले उनको नाम, थर वतन गोप्य राखेको छ ।
नारायणकाजीमाथि खन्‍निए प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार
नेपालमा पनि सलह किरा देखा पर्यो
नेपाली सेनालाई भारतद्वारा १० वटा आइसीयु भेन्टिलेटर प्रदान